सरिताका कथा- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
सबैले नदेखेको पोखरा
चैत्र २५, २०७४ सुनीता साखकर्मी
काठमाडौँ — पोखरा ! हिमाल, ताल र विभिन्न प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण सहर । दैनिक जीवनको थकाइ मेटाउन पोखरा गतिलो थलो मानिन्छ ।
राजधानीको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा आठ दशक पुरानो पोखराका तस्बिर अवलोकन गर्दै दर्शक । तस्बिर : बिजु महर्जन
८ दशक पुरानो पोखराको रूपचाहिँ कस्तो थियो होला ? बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा ती पुराना तस्बिरहरूलाई पोखरेली दिदीबहिनी समूहले प्रदर्शनीमा राखेका छन् । ‘सबैले नदेखेको पोखराको पुरानो फोटो प्रदर्शनी’ शीर्षकमा पोखराका ९७ वटा छानिएका तस्बिरहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । सबै तस्बिरहरू सुनील उलकले संकलन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले राजधानीमा संग्रहालय नै स्थापना गरी पोखराका तस्बिरहरू प्रदर्शन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए । पुर्खाले सिर्जेको संस्कृति र संस्कार पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गरिएको पोखरेली दिदीबहिनी समूहकी अध्यक्ष विष्णु थकालीले बताइन् । ‘अहिले पोखरा कंक्रिटको सहर बनेको छ, आधुनिकताका नाममा नयाँ तरिका अपनाइयो । यसले पुराना भवन र संस्कारहरू मासिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘बनिसकेका भवन सम्पदा भत्काउन त सकिँदैन तर यो कम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहल हो ।’ पोखराको ऐतिहासिक तस्बिरहरू पोखरामा मात्रै सीमित राख्न मन नलागेको भएर राजधानीमा ल्याए प्रदर्शनी गरेको उनले सुनाइन् ।
पोखरा बगाले टोलका सुनील उलकसँग पोखराको ५० हजारभन्दा बढी पुराना तस्बिरहरू छन् । उनले तिनलाई डिजिटलाइज पनि गरेका छन् । खासमा उनका बुवाले तस्बिर संकलनको काम सुरु गरेका थिए । बुवा जगन्नाथ तस्बिरका सोखिन थिए । २०१० देखि जगन्नाथले तस्बिर खिच्ने र संकलन गर्ने काम सुरु गरेको सुनीलले बताए । ९७ वटा प्रदर्शनीमा राखेर उनले अन्य तस्बिरहरू प्रोजेक्टरमार्फत देखाइरहेका छन् । उनले पोखरामा धेरै पटक प्रदर्शनीमा राखेका छन् भने पोखराकै क्षेत्रीय संग्रहालयको दुइटा कोठामा पनि राख्ने तयारीमा छन् ।
प्रदर्शनीमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको तस्बिरहरू पनि छन् । उक्त तस्बिर हेर्दै गर्दा महाराजगन्ज बस्ने अम्बिका गौचन प्रफुल्लित देखिन्थे । उनले कान्तिपुरसित उक्त तस्बिरसँगको सम्बन्ध खोले । भने, ‘मैले यही क्याम्पसबाट २०२८ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुँ ।’ उक्त कलेजका शिक्षकहरूको फोटोमा एक जनालाई औँलाले देखाउँदै उनले भने, ‘उहाँ भारतबाट पढाउन आउनुभएको मेरो मन पर्ने शिक्षक जर्ज जोन । सरसँगका ती क्षणहरू ताजा भए । अहिले त पूरै फेरिएको छ ।’
पोखरामै जन्मिएर कामको सिलसिलामा राजधानी आएका झन्डै ६० वर्षीय जनक थापा फोटोहरू देखेर नोस्टाल्जिक भए । पोखराको याम्दीमा रहेको खोलामा बाबियोले मात्रै बनेको ‘बाबियो तरो’ अर्थात् पुलको फोटो हेरेर उनी भन्दै थिए, ‘साथीको हात समातेर हामीले पनि कति तर्‍यौँ यो खोला । हात छुट्यो भने त खसेर ज्यानै जाने डर हुन्थ्यो । अहिले यो ठाउँमा आधुनिक पुल बनेको छ ।’
अहिलेको पोखरा देखेकाहरूलाई प्रदर्शनीमा राखिएको पोखराको एयरपोर्टमा तिब्बती शरणार्थी महिलाले सडक बनाइरहेको, गोरुगाडामा विमानबाट ल्याइएका सामग्री ढुवानी गरिएको र भरियालाई बोकाइएको, तामा पित्तल तथा काँसको भाँडा बनाउने पारम्पारिक तरिकामा हातबाट नै बनाइरहेको, फेवाताल किनारमा टेन्टमा बसेका पर्यटकहरू, फेवातालमा डुंगा कुर्दै गरेको, नवविवाहित दुलाहादुलहीलाई डोलीमा राखिएको, परम्परागत रूपमा घानी अर्थात् कोलमा तोरी पेलेर तल निकालिरहेको, पोखराको पहिलो फिल्म हल ‘कल्पना हल’ लगायतका तस्बिरहरू भिन्नै लाग्न सक्छन् । प्रदर्शनी आइतबारसम्म चल्नेछ ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०९:२१
राष्ट्रकविलाई रिया सम्मान
११ देशका भाषाशास्त्रीको जमघट
‘बसाइँ’ लेखकका नाममा पुस्तकालय
माणिकरत्नलाई भैरव अर्याल स्मृति